မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုံဘိုင်ရေသောက်သုံးခြင်းဟာ ဘာကြောင့် မတွင်ကျယ်တာလဲ – Shwehealth.com
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုံဘိုင်ရေသောက်သုံးခြင်းဟာ ဘာကြောင့် မတွင်ကျယ်တာလဲ
13. ဧပွီ 2016 13. ဧပွီ 2016
ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ အများစုမှာ မိမိတို့သောက်သုံးနေသည့် ရေအကြောင်းကို မစဉ်းစားမိကြပေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြို့နေလူထုအတွက် ပုလင်းရေသည် အဓိကသောက်ရေဖြစ်သည်။ ကျေးလက်တွင်မူ ရေတွင်းမှရေသည် အဓိကသောက်ရေဖြစ်သည်။ တွင်းရေကို ကျိုချက်၍သောက်သုံးရေအဖြစ် အသုံး ပြုကြသည်။ အချို့ကျေးလက်ဒေသများနှင့် ရေအိုးစင်ဟုခေါ်သော အများပြည်သူအတွက် အခမဲ့ထား ပေးသော စင်များတွင်လည်း တွင်းရေကို (ကျိုချက်ခြင်းမရှိဘဲ) ရေစစ်ဖြင့်စစ်၍ သောက်ရေအဖြစ် အ သုံးပြုကြသည်။
ဘုံဘိုင်ရေအကြောင်းပြောကြရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိလူတချို့နှင့် နယ်မြို့များရှိ လူအချို့မှအပ လူအများစုမှာ ရေအရင်းအမြစ်အတွက် ဘုံဘိုင်ရေကို အားမကိုးကြပေ။ ထိုသူတို့အ တွက် အဓိကရေအရင်းအမြစ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ရေတွင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဒေသခံအစိုး ရမှ ရေကိုလုံလောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးမပေးနိုင်ခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် ဘုံဘိုင်ခေါင်းကိုဖွင့်လျက် ရေထွက်ချိန် အထိ တနေ့ကုန်စောင့်ရလေ့ရှိသည်)၊ ရေပေးဝေရေးစနစ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်း (ရန်ကုန်မှလွဲ၍ အခြားမြို့လေးများတွင် ရေပေးဝေရေးစနစ်မှ ပိုက်လိုင်းတစ်ခုချို့ယွင်းပါက ပြန်လည် ပြင်ဆင်ပြီးသည်အထိ ၁ပတ်မှ၂ပတ်ခန့်အထိ စောင့်ရလေ့ရှိသည်) တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ အကြောင်းရင်းများက မြန်မာပြည်သူများအား ရေအရင်းအမြစ်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ရေတွင်းများကို အား ကိုးစေခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်ရေတွင်းတစ်တွင်းလျှင် မြန်မာငွေ ၇ သိန်းကျပ် (ဒေါ်လာ ၇၀၀ ခန့်)ဖြင့် ရရှိ နိုင်ပြီး သင့်အနေဖြင့် လိုသလိုသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရေအရည်အသွေး – ဘုံဘိုင်ရေက အန္တာရာယ်ကင်းရဲ့လား
ဇာတ်ကားတစ်ကားတွင် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးက ဘုံဘိုင်ခေါင်းကိုဖွင့်၊ ဖန်ခွက်ဖြင့်ခံ၍ သောက် လိုက်သည်ကို ကြည့်ရသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အထူးအဆန်းပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ မြင်နေကျ မြင်ကွင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲ တွင်ရှိသည့်အချက်တစ်ချက်မှာ ဘုံဘိုင်ရေကို သောက်ရမည်ဆိုလျှင်ပင် အနည်းဆုံးရေစစ်ဖြင့်စစ်ပြီးမှ သောက်လိုချင်ပင်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများတွင်မူ စည်ပင်ကဲ့သို့သောအဖွဲ့မှထိန်းသိမ်းပြီး ပြည်သူ့ရေပေးဝေရေးစနစ်မှ လာ သော ဘုံဘိုင်ရေကို အန္တာရာယ်ကင်းသည်ဟု ယူဆကြသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး အေဂျင်စီ (EPA) ကဲ့သို့သော အဖွဲ့များကလည်း ပြည်သူ့ရေပေးဝေရေးစနစ်များကို စစ်ဆေးရန်နှင့် သောက်ရေတွင်ပါဝင်သော အညစ်အကြေးများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ကျန်းမာရေးစံနှုန်းများ သတ် မှတ်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်တော့ အဆိုပါအနေအထားမျိုးမှာ အလှမ်းဝေးနေသေးသည်။ ရေပေးဝေရေးစနစ်မှရေကို သောက်ရေအဖြစ် ဂရုပြုစစ်ဆေးမည့် အဖွဲ့လည်း မရှိသေးပေ။
အခြားတဖက်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေသန့်ဘူးများ ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံ တ၀ှမ်းလုံးရှိ မြို့တိုင်းလိုလိုတွင် ကိုယ်ပိုင်ရေသန့်စက်ရုံများ အများအပြားရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အသုံးများ သော ရေသန့်စင်စနစ်များမှာ ဇကာ ၅လွှာစနစ်၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ အိုဇုန်းနှင့် အာအိုစနစ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ရေခဲစိမ်ပြီးသား ပါကင်ပိတ်ရေသန့်ဘူးတစ်ဘူးကို ၀.၃ ဒေါ်လာခန့်ဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။ ပါကင်ပိတ် လီတာ ၂၀ဘူးကြီးတစ်ဘူးလျှင် ၀.၅ မှ ၁ ဒေါ်လာခန့်ဖြင့် ရရှိနိုင်သေးသည်။ အဆိုပါရေ သန့်ဘူးများမှာ ပြည်သူများနှင့် အဆင်ပြေပုံရပြီး သောက်သုံးသူများတွင် ရေမှတဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှုကျဆင်းသည်ကိုပါ တွေ့ရှိရသည်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ပြောရလျှင်မူ အာအိုစနစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သော ရေသန့်ကို မကြိုက်ပေ။ အဆို ပါစနစ်မှာ ပင်လယ်ရေကို ရေချိုအဖြစ်ပြောင်းလဲသော နာမည်ကျော်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာအိုစနစ် သည် ဘက်တီးရီးယားများ အပါအ၀င် မော်လီကျူးများနှင့် အိုင်းယွန်းအများအပြားကို စစ်ထုတ်နိုင် သောကြောင့် ယင်းရေကို ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆိုပါရေကို သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ရေတွင်သဘာဝအလျောက်ပါဝင်သော သတ္ထုဓာတ်များကို ရနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေသန့်ဘူးရွေးချယ်မည်ဆိုပါက အာအိုစနစ်ကို အသုံးမပြုထားသော Alpine နှင့် Life ကဲ့သို့သော အမှတ်တံဆိပ်များကို ရွေးချယ်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
နောက်တစ်ချက်အနေဖြင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ ပေါများလှသည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တိုင်းတွင် ရေသန့်ဘူး (ရိုးရိုး သို့မဟုတ် ရေခဲစိမ်)နှင့် ရေနွေးကြမ်းကို အလွယ်တ ကူ ရရှိနိုင်သည်။ အညစ်အကြေးပါဝင်သောရေသည် ပါဝင်သောအညစ်အကြေးအပေါ်မူတည်၍ သင့် ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ခရစ်ပတို စပိုဒီယမ်ဟူသော ပိုးသည် ရေတွင်ပါဝင်လာ လေ့ရှိသည်။ နိုက်ထရိတ်သည်လည်း ရေကို ညစ်ညမ်းစေပြီး ကလေးသူငယ်များအတွက် အလွန် အန္တာရာယ်များသည်။ ခဲဓာတ်သည်လည်း ကလေးငယ်နှင့် ကလေးများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ခဲဓာတ်ပါဝင်သောရေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ သောက်သုံးလာသော လူကြီးများတွင်လည်း ကျောက်ကပ်ရောဂါများနှင့် သွေးတိုးရောဂါတို့ ဖြစ်လေ့ ရှိသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ညစ်ညမ်းသောရေကို ကျိုချက်လိုက်လျှင်ရော သောက်သုံးရန် သင့်ပါပြီလား။ အဲဒါကတော့ ပါဝင်သည့် အညစ်အကြေးအပေါ်တွင် မူတည်နေသည်။ ကျိုချက်ခြင်းသည် ရောဂါပိုး များကို သတ်နိုင်သော်လည်း နိုက်ထရိတ်၊ ခဲ စသည်တို့အပေါ်တွင် သက်ရောက်မှု ရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်လာမည်ဆိုပါက ဘုံဘိုင်ရေနှင့် အခြားအများပြည် သူသုံး သောက်ရေစင် (ရေအိုးစင်) တို့မှ ရေကို မသောက်သုံးခြင်းက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တာ ရာယ်ကင်းစေမည် ဖြစ်ပါသည်။